Maitiro ekutarisa bhatiri danho reApple Penzura | IPhone nhau
Maitiro ekutarisa bhatiri reti reApple Penzura
IPad nhau | | iPad, iPad Pro, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kusiyana neMicrosoft Surface Pen inovimba nemushandisi-kutsiva AAAA bhatiri, iyo Apple Penzura ine isingadzoreke uye inodzoserwa 0.329 Wh Li-ion bhatiri, iyo inochengetedza maitiro eApple ekusawana mukana kune Hardware yemidziyo.
Kunyangwe iine chete cheshanu chebhatiri re iPhone 6s, inogona kukunda Maminitsi makumi matatu munguva yekumhanya kukosha chete nemasekondi gumi nemashanu ekukurumidza kuchaja kuburikidza neiyo iPad Pro Mheni chiteshi. Iyo yakajairwa yakazara yakazara nguva yeako Apple Penzura ingangoita maawa gumi nemaviri.
Nekudaro, chishongedzo chaicho inoshaya chiratidzo chebhatiri chinoratidza izvo zvinotsigira mushandisi nekuonekwa nekukurumidza kwechimiro chavo. Mune ino dzidzo, iwe unodzidza maitiro ekutarisa zviri nyore mamiriro ebhatiri eako Apple Penzura zvakananga pane yako iPad Pro.
Kuti utarise mamiriro ebhatiri eako Apple Penzura, uchafanirwa kugonesa bhajeti nyowani yebhatiri yeIOS 9 pane yako iPhone kana iPad Pro:
Pinda iyo Notification Center uchitsvedza pasi kubva kumusoro kwePad Pro Pro skrini.
Chinja kune yanhasi tebhu, pfuurira pasi uye pinda iyo Hora bhatani.
Iwe unofanirwa ikozvino kuona runyorwa rwemajeti aripo pane chako chishandiso. Dzvanya pane chiratidzo chinowedzera padyo ne "Mabhatiri" kumisa iyo widget. Iwe unogona kusarudza kusarudza kuodha zvakare mawijeti pane ino skrini, kana uchida.
Dzvanya Zvaitwa kupedza.
Iye zvino unogona kuona zviri nyore kuti yakawanda sei bhatiri yako Apple Penzura, iko chaiko munzvimbo yekuzivisa. Ingo tsvaira pasi kubva pamusoro pekona uye tarisa kune iwo majeti pane yako iPad Pro uye Apple Penzura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Maitiro ekutarisa bhatiri reti reApple Penzura
Ndatenda zvikuru, chinyorwa chako chakandibatsira. Kwaziwai!
Pindura kuna Osmar
Kutenda kwazvo. Zvaindibatsira kwazvo
ndoiwana sei ipad piz
Kana isiri iyo iPad Pro, zvinoitwa zvakafanana kutarisa bhatiri reiyo iPad?
Hugo H. akadaro
Mukugadzirisa iwe unoenda kune iyo "bhatiri" menyu uye muchiratidziro iwe unomutsa "bhatiri kubhadharisa" uye iyo chaiyo muzana yemabhatiri mutero ichaonekwa kumusoro kumusoro. Iwe unogona zvakare kuita izvo zvavanotsanangura pano, chete kuti haisi iyo "ziviso nzvimbo" asi mu "doko" (chiteshi) panobuda mamiriro ekunze uye ziviso dzewidget dzawasarudza. Ndinovimba zvinobatsira kwauri.
Pindura Hugo H
Parrot inozivisa yayo Bebop Drone 2, ikozvino iine kuzvitonga kuzere
Uber inowedzera profiles kuti iwe ugone kupatsanura yako wega account kubva kune iyo kambani account